Tsy misy toerana ho an’ny fitsilamodamohana
“Izay tsy momba Ahy dia manohitra Ahy; ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka” Lio. 11:23
Fomba ahoana moa no hiposahan’ny fahazavantsika amin’izao tontolo izao raha tsy eo mihitsy aloha ny fiainantsika kristianina ho ohatra? Ahoana no ahalalan’izao tontolo izao fa an’i Kristy isika, raha toa isika tsy manao na inona na inona ho Azy? Tsy misy toerana ho an’ny marimaritra iraisana eo anelanelan’ireo miasa ho an’i Kristy amin’ny heriny manontolo , sy ireo miasa ho an’ny fanoherany ny fanahy. Izay rehetra mijoro ho toy ny mpitsilamodamoka eo an-tanimboaloboky ny Tompo dia sady efa tsy manao na inona na inona ho an’ny tenany , no mbola manembatsembana ny manam-pikasana te hiasa. Hitan’i Satana hatrany ny hampiasany izay rehetra tsy manao ezaka mafana hahazahoany famonjena sy hiasany famonjena ho an’ny hafa. Na oviana na oviana ny kristianina no tsy miambina , dia mano fanafihana tampoka sady mahery setra ilay fahavalo mahery . Raha tsy malina sy mahavitrika ny mambran’ny fiangonana, dia ho resin’ny fandrika apetrany.
Maro ireo tokony hijoro tsara amin’ny fahamarinana sy fahitsiana , no efa naneho fahalemena sy fisalasalana , ka vao mainka nampirisika ny fanafihan’i Satana. Ireo tsy mitombo amin’ny fahasoavana , ka tsy mikatsaka izay hahatratrarana ny fenitra ambony indrindra eo amin’ny fitakian’Andriamanitra, dia ho resy (...).
Ao anatin’ny fotoan-tsarotra sy ny ady sarotra no ilaintsika rehetra fanohanana sy fampiononana izay azontsika avy amin’ny fitsipi-piainana marina, avy amin’ny faharesehan-dahatra ara-pivavahana tsy miovaova avy amin’ny fitiavan’i Kristy mitoetra sady azo antoka , ary avy amin’ny fanandramana manana amby ampy momba ny zavatra araka an’Andriamanitra.
Ny asa izay ataontsika na tsy ataontsika no manambara amin-kery lehibe ny fiainantsika sy izay anjarantsika amin’ny ho avy. Mangataka antsika Andriamanitra mba hanararoatra ny fotoana mety homena antsika ka hampiasa izany amin’ny zavatra ilaina. Zava-doza ho an’ny fitomboantsika ara-panahy ny fanamaivanana ny fanaovana izany. Manana asa lehibe atao isika. Aoka tsy holaniantsika amin’ny fitsilamodamohana ny ora sarobidy nomen’Andriamanitra antsika, izay manamboatra ny toetrantsika ho lavorary ho voaomana ho an’ny an-danitra. Aoka tsy ho kamo sy atoritory isika amin’ity asa ity , satria isika tsy manam-potoana holaniana amin’ny zavatra tsy misy dikany. Hanampy antsika handresy ny ratsy Andriamanitra raha mivavaka sy mino Azy isika. Fa afaka manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’Ilay tiantsika.